လှပသော အမျိုးသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံရခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးရွားစေနိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » လှပသော အမျိုးသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံရခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးရွားစေနိုင်
လှပသော အမျိုးသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံရခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးရွားစေနိုင်
Posted by chitpyae on Jul 23, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Gossip, Rumor | 8 comments
အမျိုးသားများ(အကုန်လုံး ဟု မဆိုလိုပါ) မိန်းမချောလေးများနှင့် တွေ့သောအခါ ……
နှလုံးခုန်မြန်လာခြင်းနှင့် ခြေဖ၀ါး၊ လက်ဖ၀ါးများ၌ ချွေးပြန်လာခြင်းသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းသော အမျိုးသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံရသည့်အခါ ဖြစ်တတ်ကြောင်း အမျိုးသားများစွာတို့ သတိပြုမိပြီးဖြစ်သည်။
ယခုအခါ သူတေသနအသစ်တစ်ရပ်အရ အမျိုးသားများသည် လှပသော သူစိမ်းတစ်ရံစာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ငါးမိနစ်မျှသာ တွေ့ဆုံရုံနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများ လွန်စွာမြင့်တက်လာပြီး ယင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးရွားစေကြောင်းသိရသည်။
“ငါဒီလိုလူစားမျိုးမဟုတ်ဘူး”ဟုတွေးလိုက်မိသောအခါ၊ အဆိုပါ အမျိုးသမီးက အနားကပ်ထိုင်သောအခါ၊ သို့မဟုတ်အဆိုပါအမျိုးသမီး၏ စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိအောင် ကြိုးစားသောအခါ အကြင်ပုရိသ၏အခြေအနေသည် အဆိုးရွားဆုံးသို့ ရောက်ရှိသွားသည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်တို့က
အဆိုပါအမျိုးသားတို့၏ စိုးရိမ်သောကဖြစ်မှုနှုန်းသည် လေယာဉ်ပျံတစ်စင်းပေါ်မှခုန်ချရသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်သောနှုန်းနှင့် ညီမျှသည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါ အမျိုသားတို့၏ ကော်တီဆော ဟော်မုန်းပါဝင်မှုနှုန်းသည် လေယာဉ်ပျံပေါ်မှ ခုန်ချရသည်ထက်ပင် ပို၍မြင့်မားနိုင်သည်ဟု ပညာရှင်တို့က ဆို၏။ ယင်းသို့ ကော်တီဆော ဟော်မုန်းမြင့်တက်မှုက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်
နှလုံးရောဂါကြောင့် အမောဖောက်လာနိုင်ခြေကို လွန်စွာမြင့်မားစေသည်ဟု
စပိန်နိုင်ငံ ဗလင်စီယာတက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ သုတေသနတွင် အမျိုးသား ၈၄ဦးကို ပါဝင်စေလျှက် တစ်ဦးတည်းရှိနေစဉ်နှင့် လှပသော အမျိုးသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ကော်တီဆော ဟော်မုန်းပါဝင်မှုနှုန်းကို တိုင်းတာကာ တွက်ချက်သုတေသန ပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့သောအကြောင်းအရာများကြောင့် … ရွာထဲမှ ရွာသား ကိုကို ၊ မောင်မောင် ၊ ဦးလေး တို့ ဆင်ခြင် နိုင်ရန် အလို့ငှာ တင်ပြပေးအပ်ပါသည် ….
ရွာသူချောချော လေးတွေနား သိပ်မကပ်ကြနဲ့ နော် ….. ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တယ်တဲ့
” မိန်းမချော လေး များ အနားကပ်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည် ”
ပုံ / အမျိုးသားကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အသင်းကြီး
View all posts by chitpyae →
chitpyaeရေ အမျိုးသားကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အသင်းကြီး မှာ ဘယ်သူများ ဥက္ကဌ
လုပ်ပါသလဲ ဒီရွာထဲကလူများလား …
ဒါဆို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမတုန်းဗျ…
အနာသိ ရင် ဆေးရှိရမှာပေါ့ ကွယ်
လှပတဲ့ မိန်းမ နား သွားကပ်လို့ 
နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်လာတယ် ဆိုရင်
ဘယ်သူ့ ကြောင့်ခုန်တာ ဖြစ်မလဲ
ဒီအတွက် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မယ် ဆိုရင်
အဲဒီ လှပတဲ့ မိန်းကလေး ကို သာ
အမြန်ဆုံး ဖက်ပြီး အာပွားတစ်ဝကြီး ပေး လိုက်
ကျန်းမာရေး ထိခိုက်တဲ့ ကိစန က နေ
ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်တဲ့ ကိစန ဖြစ်သွားမယ်
( တစ်ခု တော့ ရှိတယ်…. လက်ဖဝါး ဝဲ သိုင်း တွေ ရောက်လာတာမို့အာပွားပေးပြီးတာနဲ့ရှောင်လင် ကိုယ်ဖော့ သိုင်း ကို ချက်ချင်း သုံးဖို့ တော့ လိုမယ် နော် )
ဟေး ဟေး … ကြိုပြောထားမယ်နော် … သမီးနဲ့ နီးနီးနေလို့ အဆင်မပြေတော့ဘူး … :P:P:P
မမနွယ်ပင်ရေ …. ရွာထဲက အမျိုးသား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အသင်းကြီးမှာတော့
ဥက္ကဌ အဖြစ် သူကြီး နှင့် အတွင်းရေးမှုးအဖြစ် ဦးအောင်ပု ၊ အဖွဲ့ ၀င်များ အဖြစ် ဦးကြောင်၊ ကိုပေ ၊ ရွှေဘိုသား အစရှိသဖြင့် ပါဝင်ပါကြောင်း …..